Ungayandisa njani iNqanaba lokuKhangela ngokuKhangela, ukuJonga, kunye nokuThumela iiMpazamo ezingama-404 kwiWordPress | Martech Zone
NgoLwesithathu, ngoFebruwari 24, 2021 Lwesine, Matshi 24, 2022 Douglas Karr
Sinceda umxhasi weshishini ngoku ngokuphumeza indawo entsha ye-WordPress. Ziindawo ezininzi, iilwimi ezininzi ishishini kwaye ube neziphumo ezibi malunga nokukhangelwa kule minyaka idlulileyo. Xa sasicwangcisa indawo yabo entsha, safumanisa imiba embalwa:
Archives - babane iziza ezininzi kule minyaka ilishumi idlulileyo Ngumahluko obonakalayo kubume be-URL yendawo yabo. Xa sivavanya ikhonkco elidala lephepha, zazingama-404 kwindawo yazo yamva nje.
Backlinks - xa senze uphicotho lwe-backlink sisebenzisa Semrush,
translation - uninzi lwabaphulaphuli liSpanishi, kodwa indawo yabo ixhomekeke kuphela kwiqhosha lokuguqulela kunokuba lifakelwe, amaphepha aguqulelwe ngesandla kwisiza.
Indawo yabo yokugqibela yayi ngumnini yi-arhente ye-SEO ababebasebenzela… ngokoluvo lwam isenzo esibuhlungu kakhulu esiphatha umnini seshishini. Ke, ukuya phambili kuyakufuneka senze indawo entsha ngokupheleleyo kwaye siyilungiselele… inkcitho enkulu kumthengi.
Inxalenye ebalulekileyo yesicwangciso esitsha kukusebenzisa le micimbi mithathu ingentla. Kufuneka siqinisekise ukuba sibandakanya ukuhanjiswa kwakhona kuwo onke amaphepha alahlekileyo (iimpazamo ezingama-3) KANYE sinokubasebenzisa kubasebenzisi babo bokukhangela iilwimi ezininzi ngokongeza amaphepha aguqulelweyo. Kule nqaku, ndiza kugxila kwi Imeko yempazamo engama-404 -Kuba kuyabenzakalisa isikhundla sabo seinjini yokukhangela.
Kutheni iimpazamo ezingama-404 zingalunganga kwizinga le-SEO
Ukwenza lula iinkcazo kubaxhasi nakumashishini, bendihlala ndibazisa ukuba iinjini zokukhangela isalathisi iphepha kwaye ulungelelanise namagama athile aphambili ngumxholo okwelo phepha. Nangona kunjalo, bona isikhundla iphepha elisekwe kukuthandwa kwalo-eliguqulelwa ngesiqhelo kwii-backlinks kwezinye iisayithi.
Ke… khawufane ucinge ukuba unephepha kwindawo yakho ukusuka kwiminyaka eyadlulayo ekwimigangatho elungileyo kwaye liqhagamshelene kwimithombo eyahlukeneyo. Emva koko wakha indawo entsha apho elo phepha lihamba khona. Iziphumo kukuba xa iinjini zokukhangela zirhubuluza kwi-backlinks… okanye umsebenzisi kwenye indawo enqakraza ikhonkco… ikhokelela kwimpazamo engama-404 kwindawo yakho.
Yhu. Oku kubi kumava omsebenzisi kwaye kubi kumava abasebenzisi benjini yokukhangela. Ngenxa yoko, injini yokukhangela iyayityeshela i-backlink… ethi ekugqibeleni ilahle igunya lesiza sakho kunye nenqanaba.
Iindaba ezimnandi zezokuba i-backlinks kwindawo enegunya ayipheli ngokwenene! Njengokuba siye sakha iisayithi ezitsha zabathengi kwaye saqondisa ngokufanelekileyo amakhonkco amadala kumxholo omtsha… siwabonile la maphepha abuyela phezulu phezulu kwiphepha lesiphumo se-injini yokukhangela (SERP).
Ukuba unayo iarhente ejolise kutyelelo lwakho lokuphilayo (kwaye YONKE indawo ye-arhente yoyilo lwewebhusayithi kufuneka) okanye ukuba unegqwetha le-SEO elingakhange lenze lo msebenzi, ndiyakholelwa ukuba abakhathali ngokwenyani kubugcisa babo. Iinjini zokukhangela ziyaqhubeka ukuba ngumthombo ophezulu wetrafikhi yamathemba afanelekileyo ngenjongo yokuthenga.
Ke, ngayo… ukuba uyayila kwakhona indawo yakho, qinisekisa ukuba uphicotha kwaye uhambisa ukugcwala kwakho kumaphepha amatsha ngokufanelekileyo. Kwaye, ukuba awuyikuyila ngokutsha indawo yakho, kuya kufuneka ubeke esweni amaphepha akho angama-404 kwaye uqondise kwakhona ngokufanelekileyo!
QAPHELA: Ukuba awufudukeli kwindawo entsha, ungatsiba ngqo kwiNyathelo 5 kule nkqubo ukubeka esweni kunye nokuhambisa kwakhona amaphepha angama-404.
Inyathelo 1: Phambi kokuSungulwa koPhicotho lwale ndawo yangoku
Khuphela zonke iiAsethi zaNgoku -Ndikwenza oku ngeapps enkulu ye-OSX ebizwa ngokuba IndawoSucker.
Fumana uluhlu lwazo zonke ii-URL zangoku -Ndenza oku nge Ukukhwaza uFrog.
Fumana uluhlu lwazo zonke ii-Backlinks - usebenzisa Semrush.
Ngoku, ndinazo zonke iiasethi kunye nawo onke amaphepha kwindawo yabo yangoku. Oku kuyakwenza ukuba ndiyenze kakuhle imephu nganye yezi zixhobo kwiindlela ezintsha kwisiza esitsha (ukuba zifuna ukuhanjiswa).
Inyathelo 2: Cwangcisa kwangaphambili iSicwangciso soLawulo lweSiza, iiSlugs kunye namaPhepha
Inyathelo elilandelayo kukuphicotha umxholo wabo kwaye bachonge ukuba sinokwenza njani lula kwaye sakhe i ilayibrari yomxholo ilungiswe kakuhle kwaye yahlelwa kwindawo entsha. Uninzi lwexesha, ndakha amaphepha angenanto kwimeko yeWordPress ehleliweyo ukuze ndibenoluhlu lokutshekisha ukuze ndigqibe kamva kubabhali bam nakwabaqambi abaza kusebenza kubo.
Ndiyakwazi ukuphonononga ii-URL ezindala kunye neeasethi ukuphinda ndenze amaphepha ayilwayo ukuze kube lula ukuqinisekisa ukuba ndinayo yonke into eyimfuneko kwaye akukho nto ilahlekileyo kwindawo entsha ebikule ndawo indala.
Inyathelo lesi-3: Qalisa kwangaphambili imephu yee-URL ezindala kwii-URLs ezintsha
Ukuba sinokwenza lula ukwakheka kwe-URL kwaye sizame ukugcina iphepha kunye nokuthumela ii-slugs ezimfutshane kwaye zilula, senza njalo. Ndiqaphele kule minyaka idlulileyo ukuba ngelixa ulungelelwaniso kwakhona kusithiwa luphulukene negunya elithile ... ukwenziwa kwazo kuqhuba ukonyuka kokuzibandakanya, okuguqula ukuba kubengcono. Andisoyiki phinda uthumele iphepha elikwinqanaba eliphezulu kwi-URL entsha xa isengqiqweni. Yenza oku kwi-spreadsheet!
Inyathelo lesi-4: Ukuphehlelela kwangaphambili ukungenisa kwakhona ukuKhangela
Usebenzisa ispredishithi kwiNyathelo 3, ndenza itafile elula ye-URL esele ikhona (ngaphandle kwesizinda) kunye ne-URL entsha (enesizinda). Ndingenisa oku kuhanjiswa kwakhona kwi Inqanaba lePlagi ye-SEO SEO ngaphambi kokumiliselwa kwesiza esitsha. Inqanaba leMathematika yi Eyona plugin yeWordPress yeSEO, ngokoluvo lwam. Inqaku elisecaleni… le nkqubo inakho (kwaye kufuneka yenziwe) nokuba inokwenziwa ukuba ukhona Ukuhambisa indawo kwindawo entsha.
Inyathelo 5: Yazisa kwaye ubeke esweni ii-404s
Ukuba uwenzile onke amanyathelo ukuza kuthi ga ngoku, unayo indawo entsha, konke ukuqondisa kwakhona kuyo, yonke imixholo ekuyo, kwaye ukulungele ukuyazisa. Umsebenzi wakho awukapheli… kufuneka ujonge indawo entsha ukuchonga nawaphi na amaphepha angama-404 usebenzisa izixhobo ezibini ezahlukeneyo:
Ikhonsoli ye Khangela yeGoogle Ngokukhawuleza nje ukuba isiza esitsha siphehlelelwe, uya kufuna ukungenisa imephu ye-XML kwaye ujonge emva komhla okanye ukuze ubone ukuba akukho micimbi mibi na kule ndawo intsha.
Kwinqanaba le-Math SEO Plugin's 404 Monitor - Esi sisixhobo ekufuneka usisebenzise rhoqo… hayi xa usungula indawo. Kuya kufuneka uyenze ikwindawo yeDeshibhodi yeMathematics.
Njengomzekelo, sisungule indawo enendawo eyahlukeneyo Ugqirha wamazinyo ogxile kubantwana abanogonyo lweMedicaid. Elinye lamaphepha esiwafumanise ukuba linama-backlinks angakhange agqunywe linqaku, Amazinyo abantwana 101. Indawo esele ingenayo inqaku. Umatshini weWayback wayenombhalo kuphela. Ke xa sisungula indawo entsha, siqinisekisile ukuba sinenqaku elibanzi, i-infographic, kunye nemizobo yezentlalo eqondisa kwakhona ukusuka kwi-URL yakudala iye entsha.
Ngokukhawuleza xa sasisungula isiza, sabona ukuba indlela ethe kratya yokuhambisa abantu ngoku iya kwiphepha elitsha kwezi URL zakudala! Eli phepha laqala ukukhetha ezinye izithuthi ezintle kunye nenqanaba ngokunjalo. Khange sigqibe, nangona kunjalo.
Xa sijonga i-404 Monitor, safumana ii-URL ezininzi "ezinamazinyo abantwana" awayefika kumaphepha angama-404. Songeze iindlela ezichanekileyo zokuhambisa kwakhona kwiphepha elitsha. Inqaku elisecaleni… singasebenzisa i intetho eqhelekileyo ukufaka zonke ii-URLs kodwa silumke ukuqala.
Lo mfanekiso ungasentla ulapha ngokwenqanaba iMathematics Pro equka ukubanakho kokwahlulahlula uhlengahlengiso lwakho… into elungileyo. Siye sahamba ne-Rank Math Pro kuba ixhasa ii-schemas zeendawo ezininzi.
Ngoku, eli phepha lelabo # 8 iphepha elirhweba kakhulu kwindawo entsha kwiveki yokwazisa. Kwaye kukho iphepha elingu-404 apho iminyaka eliqela nanini na xa umntu efika! Yayilithuba elikhulu elilahlekileyo elalingazukufunyanwa ukuba besingalumkanga malunga nokuqondisa kwakhona ngokufanelekileyo kunye nokubeka iliso kumakhonkco amadala abekhona kwiwebhu kwindawo yabo.
Inqanaba leMathematika linenqaku elineenkcukacha zokulungisa iimpazamo ezingama-404 endinokukukhuthaza ukuba uzifunde.
Inqanaba leMathematika: Ungazilungisa njani iimpazamo ezingama-404
tags: 404Iimpazamo ezingama-404phicothoindawo yokukhasaikhonkco lokukhangela kuGoogleukuhambisa kwakhona ukuhambisa kwakhonaii-urls zemephuUhlobo lwezinto eziphilayoinqanaba leeplagi zezibaloisikhundla sezibalo seoisikhundla se-math SEO pluginudidiuqondisa kwakhonakukhala iseleindawo yokukhangelasemrushSEOzenqanaba seoinyokaIndawo yokufunxaindawoWordPress